Saynis yahanadu waxay raadinayaan beeralayda danaynaya inay hagaajiyaan heerarka bacriminta iyo abuuritaanka dalagyada kala duwan - Journal "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Isbeddellada / Isbeddellada Agrotechnology
Saynis yahanadu waxay raadinayaan beeralayda danaynaya inay hagaajiyaan heerka bacriminta iyo abuurka dalagyada kala duwan
в Agrotechnology, Sayniska, Isbeddellada / Isbeddellada, Injineerinka / Teknolojiyada
Saynisyahanada Jaamacadda Purdue waxay raadinayaan beeralayda inay ka qaybqaataan laba mashruuc oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo heerka bacriminta iyo abuuritaanka dalagyada kala duwan. Davide Cammarano, Associate Professor of Agronomy, ayaa isticmaali doona dareenka fog iyo sayniska xogta si loo kordhiyo faa'iidada beeraha iyada oo la yareeyo khatarta deegaanka.
Mashruucii ugu horeeyay, mashruuc wadajir ah oo ka dhexeeya Jaamacadda Minnesota iyo Purdue, ayaa raadinaysa in la helo beeralayda Indiana iyo Minnesota oo raba inay tijaabiyaan taxane ah hababka codsiga nitrogen. Kahor beerashada galleyda, waxaa la waydiin doonaa inay dalbadaan qiyaaso kala duwan oo nitrogen ah oo xariijimo ah. Ka dib, cilmi-baarayaashu waxay heli doonaan satalayt ama sawirka hawada ee goobaha waxayna isticmaali doonaan xogtan si ay u horumariyaan heerka beddelka ah ee bacriminta nitrogen.
Maanta, kaliya 20 boqolkiiba beeralayda Midwest waxay ku dhaqmaan codsiga nitrogen ee beerahooda. Xogtu waxay ka caawin doontaa Cammarano iyo asxaabtiisa inay go'aamiyaan heerarka codsiga ee bixiya faa'iidooyinka beeraha, dhaqaalaha iyo deegaanka ee ugu weyn ee noocyada kala duwan ee xaaladaha beeraha, taas oo u oggolaanaysa beeraley badan inay adeegsadaan xeeladaha dhibcaha nitrogen si kalsooni leh.
"Xogta aan aruurineyno waxay naga caawin doontaa inaan horumarino qorshooyinka lagu codsanayo nitrogen xaalado gaar ah iyo dalagyo gaar ah," ayuu yiri Cammarano, oo waayo-aragnimadiisa ay ka mid tahay qaabeynta dalagga, dareenka fog iyo beerashada saxda ah. "Waxaan isticmaaleynaa qalabka beeraha dhijitaalka ah si aan faa'iido ugu badan u keeno beeralayda iyo deegaanka."
Cilmi-baarayaashu waxay raadinayaan wadar ahaan 10 beerood oo ugu yaraan 30 hektar ah oo ku kala baahsan gobollada kuwaas oo ku kala duwan u nuglaanta wasakhowga biyaha dhulka hoostiisa Nitrate-ka. Kuwani waxay noqon doonaan Jasper, Cass, Miami, Carroll, Blackford, Henry, Hendrix, Shelby, DuBois, iyo degmooyinka Wonderburg ee Indiana.
Beeralayda waa in ay u qalmaan Barnaamijka Dhiirigelinta Tayada Deegaanka (EQUIP) oo ay haystaan ​​la taliye dalagga oo doonaya in uu la shaqeeyo mashruuca. Waxa la door bidayaa kuwa haysta khariidado dalbashada bacriminta, beeraha, wax-soo-saarka iyo xogta muunada ciidda siddeedii ilaa tobankii sano ee la soo dhaafay.
Beeralayda ka qaybqaadanaya cilmi baarista waxay heli doonaan $1000 iyo magdhow kasta oo dalagyada lumaya. La taliyayaasha dalagyadu waxay heli doonaan $300 goobtiiba.
Mashruuc labaad oo iskaashi ah oo ay hogaaminayso Jaamacadda Illinois ayaa raadinaysa suufka, galleyda, soybean, iyo beeralayda sarreenka ee Indiana, Arkansas, Idaho, Illinois, Louisiana, Texas, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, iyo Washington si loo hagaajiyo xeeladaha bacriminta.
Cilmi-baadhayaashu waxay siin doonaan beeralayda qalab ay u isticmaali karaan si ay u sameeyaan qiimeyn gaar ah, xog-ururin ku saabsan saameynta dhaqaale iyo deegaan ee nitrogen, fosfooraska iyo xeeladaha maareynta heerka abuurka.
"Waxaan raadineynaa fursado beeralayda si ay uga faa'iideystaan ​​heerka abuurka iyo codsiga bacriminta," ayuu yiri Cammarano. "Haddii aan heli karno meel dhexe si aan u helno wax-soo-saarka ugu badan ee qadarka ugu yar ee bacriminta, kaliya kama faa'iideysan doono dhaqaale ahaan, laakiin sidoo kale deegaan ahaan."
Akhri maqaal buuxa
Source: News baradhada
Tags: heerarka codsiga nitrogenheerka abuurkaUnited Statescodsiga bar ee nitrogenbeerashada saxda ahbeeraley
ShareShare44Share32Si aad u soo diri
Caqabadaha hortaagan beeralayda ayaa sii weynaanaya oo sii adkaanaya. Si loo xalliyo iyaga, waxaad u baahan tahay wax ka badan cagaf cusub;...
FASTRAC 4000 Taxanaha Cagaf-cagaftu waa nooc la cusboonaysiiyay oo kor u qaadaya sumadda ganacsiga JCB. Waxay leeyihiin dhibco badan...
Bandhigu wuxuu ka dhacayaa gobolka Ust-Labinsk ee Territory Krasnodar. Ku dhawaad ​​400 oo warshadood oo qalab ah oo ka kala socda Ruushka iyo dalal shisheeye ayaa ka qayb qaadanaya, warbixino...
Bangiga saddexaad ee baradhada shinni ee Ruushka ayaa laga abuuri doonaa Yamal
Bangi noocyo caafimaad leh oo baradho shinni ah ayaa Salekhard ka furi doona shaqaalaha FRC ee Baradhada oo loogu magac daray A. G. Lorkh. Saynis yahanadu waxay u isticmaalaan inay...
Mid ka mid ah hababka muhiimka ah ee diyaarinta beeritaanka baradhada waa daaweynta digriiga leh ilaalinta iyo kicinta koritaanka. Hawsha soo dhawayntu waa ilaalinta soo ifbaxaya...
In ka badan 1 bilyan oo rubles ayaa lagu bixin doonaa dib u soo celinta dhulka Bashkiria
Baradhada iyo khudaarta khaanadaha dukaanka. Dhiirrigelinta Ururka Baradhada